युगसम्बाद साप्ताहिक - मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ?
Saturday, 04.04.2020, 01:53am (GMT+5.5) Home Contact
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ?
Tuesday, 05.08.2018, 11:05am (GMT+5.5)
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमण यही वैशाख २८ गते शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै हुन लागेको मोदीको भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि विग्रिएको दुई देशको सम्बन्धलाई अरु सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ मोदीको भ्रमण हुन लागेको बताइन्छ । घोषित कार्यतालिका विपरीत मोदीबाट नयाँ र आकर्षक घोषणा हुने अपेक्षा धेरैको छ । नेपाल र भारतबीच कायम रहेको ऐतिहासिक–पौराणिक सम्बन्ध आधुनिक कालमा आएर त्यति सुखद् हुन नसकेको आम नेपालीले अनुभूत गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीको हुन लागेको नेपाल भ्रमण त्यस्तो भावना हटाउन सहायक सिद्ध हुने विश्वास छ । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री भारत जाने तर भारतबाट नआउने गरेको सन्दर्भमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हुनेछ ।
नेपाल र भारतबीच धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध अनि जनताबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर छ राजनीतिक रुपमा त्यस्तो छैन । नेपालमा जहिले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैआएको भारतको पछिल्लो सत्ताले पनि नेपालमा नाकाबन्दी गरेसंगै छिमेकी मुलुकप्रतिको नीति र दृष्टिकोण बदलिएको सुरुको संकेत धुमिल भएको थियो । नेपालमा नाकाबन्दी गरेर विश्वव्यापी रुपमा नेपालको संविधानको कुप्रचार गर्दैआएको भारतका लागि अन्ततः त्यो उसैका लागि प्रतित्यूपादक सावित भयो । भारत यसैकारण पनि नेपालसंगको सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा राजनीतिक छलफल नहुनु सम्बन्ध सुधारको प्रमुख संकेत हो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि आयोजना पूरा नगरेको फेहरिस्त बताउँदा मोदी नतमस्तक भएका थिए । विशेष गरी ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार विकासमा भारतले लामो समयदेखि आयोजना ओगटेर राखिरहेको छ । अरुण–३ बल्ल शिलान्यास हुनेछ ।
मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमणका क्रममा नेपालको शान्ति र विकास नै आफ्नो चाहना भएको भन्दै संसदमा सम्बोधन गर्दा मोदीले एमाओवादी अध्यक्ष पष्पकमल दाहाललाई ‘सम्राट अशोक’संग तुलना गर्दै “बुद्धको भूमिबाट विश्व शान्तिका लागि नयाँ सन्देश जानेवाला छ र त्यसका लागि तपाईंहरुले सोही अनुसारको संविधान निर्माण गर्नुहुनेछ” भन्दै संविधानको मूल मर्म, भावना र उसको गुणलाई नबिर्सन आव्हान गर्नुभयो । तर, संविधान जारी भएपछि तिनै मोदी ‘खलनायक’ बन्दै नाकाबन्दी गरे । त्यतिबेला नेपालको विकास कृषि, जलस्रोत, जडिबटी र पर्यटनबाट मात्रै हुने स्पष्ट धारणा नेपालका विधायकहरुको बीचमा राख्नुभएका मोदीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान गरेको बताउनुभयो । तर, हस्तक्षेपकारी नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुभएन । अहिले त्यही विगतको तीतो बिर्साउन मोदीले नेपालमा रहँदा भरपूर प्रयास गर्ने अपेक्षा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणमा नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आउनुहुने मोदी बिहारको राजधानी पटनाबाट जनकपुर आउने र त्यहाँ नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम हुनेछ । मोदीले जनकपुरमा जानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने र त्यहाँबाट भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरी मुक्तिनाथ पुग्नुहुनेछ । मुक्तिनाथको दर्शनपछि उहाँ काठमाडौं फर्कनुहुनेछ । मोदीको सम्मानमा २८ गते साँझ नै टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको टुकडीले ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गर्ने छ । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी आली र मोदीबीच द्वीपक्षीय छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन समेत आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकाले काठमाडौँमा मोदीको सम्मानमा नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रम आयोजन गरेको छ । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, उपरराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसैबीच मोदीको दुई दिने भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रोको शिलान्यास हुने छ । ९०० मेगावाट क्षमताको परियोजनाको काठमाडौँबाटै दुई प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २९ गते काठमाडौँबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँबाट भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्नेछन् । त्यसका लागि लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक एसजेभिएन नेपाललाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र समेत प्रदान गरिसकेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध जुन चरणमा पुगेको छ र भारतले नेपाली जनतालाई जसरी दुःख दिएको छ त्यो भारतीय शासका मीठा शब्दले मात्र पूर्ति हुँदैन । नेपालले भारतसंग भोगिरहेको व्यापार घाटा, नेपालको सीमित निर्यातलाई खडा गरेको अनेक अबरोध, सीमा अतिक्रमण, डुबान समस्याको समाधानमा भारतले जहिले पनि आनाकानी गर्दैआएको छ । यसपटक ती समस्या समाधानमा के कस्तो प्रयास र प्रतिबद्धता हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।